MAWDUUC 4: OGEEYSIIN IYO CAAWINAAD | Ung & Gravid
MAWDUUC 4: OGEEYSIIN IYO CAAWINAAD
Waxaa jiraan dad badan oo ey tahay howl shooda iney hogaamiyaan salbatiimo iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro. Dagmooinka dhan waxay haastaan kalkaaliso caafimaad guud iyo wax badan eh adeegga caafimaadka ee dugsiyada laga helaayo iskoolaadka. Meelaha qaarkood waxey leeyihiin xafiis caafimaad loogu talagaley dhalanyarta.Tiirmuudka Amathea kaliya ayaa shaqadooda tahay in ey hogaamiyaan qofkii uur qaado. Waxey kale bixiyaan wadahadlid iyo in la dabagaallo naago iyo niman ka soo dheceen ilmo, waxey kale ee sameyaan koorso xaamilood loogu talagaley nagaha kaligood sugaayaan in ey noqdaan qofka mas’uuliyada cunuga haasto.
Tiirmuudka Amathea waxey xafiis ku qabaan 13 gobal iyo wadanka dhan laga hogaaminaaya taleefoon.
Waxaa jiira ururo kale u furan wadahadal iyo hagaamis:
www.suss.no dhaxbartamaha dhalanyarta caafimaadka, isla wadanoolaasho/guur iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro. Wadanka dhan taleefoon caawinaad ku yaala ka shaqeeyaan qof soo bartay caafimaadka.
www.unghelse.no Ogeeysiin baab iyo cawinaad deeq loogu talagalay dhalanyarta. Inta waxaa weydiin kartaa su’aalo ku saabsan dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro, salbatiimo, iyo uur aad rabin. Ka shaqeyyaan agaasiinta caafimaadka iyo Nordland gobalkadagmada.
www.klara-klok.no Internetka meel ka mid eh su’aalo waydiineysid iyo jabaab aad ka heleysid maadooyin wadahadal badan. Jawaabta waxaa la soo bandhigaa isbuuc gudihiis boga internetka. Ka shaqeyaan agaasiinta caafimaadka iyo Nordland gobalkadagmada.
www.ung.no Xaqiiqda iyo shay ka hadlaayo dhalanyarta.
www.samliv.net Bog ogeesiin ah ku saamsan galmad iyo isla wada noolaashada/ guur dhalanyarta)
www.korspahalsen.no Kors på halsen waxaa ka shaqeyaan Røde kors ee tahay meel internetka ka mid eh la hadli kartid dhalanyarta kale, tusaalo ku saabsan gacaliye ama gacaliso, galmad, guur/ isla wadanoolaasho. Inta dhalanyarta waxey isa siinaayaan garab ama tiir ey ku tiirsadaan iyo waano.
www.sexogsamfunn.no Galmood iyo bulsho, hoorey waxeey ahaan jirtay Kiliiniko loogu talagalay galmad warbixin. Ka shaqayaan hogaamin ku yaal iskoolka Oslo, waxey kale ka jawaabaan taleefoon iyo e-mail oo ka imaaday wadanka dhan.
www.dixi.no DIXI waxey u shaqeeyaan in eey caawiyaan dadka la xoogey iyo qaraabadooda. DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.
Khibrat ma’uleedahay meel ka mid eh internettka aad ka keensatay ogeeysiin ku saabsan galmad, salbatiimo guur/isla wadanoolaasho iyo uur?
Dhalanyarta waxey isticmaalaan qalab kala duwan in ay ku shukaansadaan mise xiriir la yeeshtaan. Taasoo ah chat, msn, talefoonka , sms, masawiir iyo filin isku diraan moobiiladooda iyo kaamerada internetka.
Bandankood interneka ayeey ku bilaabaan galmadooda ugu horeeyso. Ma kula tahay khibrad sax ah?
Ma kula tahay in ey dhalanyarta maanta ey amaano isku qabaan iyo dareemahooda fursadaha internettka ku jiraan? Ma kasee marmarka qaarkood in internetka laheyn tusaalo fiican)?